Yakachipa yakasarudzika sheet sheet simbi yekutengesa zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Iyo jira simbi maitiro inosanganisira kuwaridza. Inowanzo shandiswa iweti yemagetsi uye kupisa kwegesi, pamwe ne laser welding, brazing, thermal welding, electron beam welding, putika inoputika, nezvimwe.Sheet simbi simbi zvigadzirwa zvinogadziriswa nesheet simbi tekinoroji.
Yakasarudzika jira simbi yekumonera zvikamu-yakanangana nendarira sheet simbi yekutengesa yekugadzirisa michina zvikamu
Tinogara kwese kwese. Sheet simbi zvikamu hazvipatsanurike kubva kune jira simbi zvikamu kuburikidza nefilament simba ichitenderera, laser kucheka, rinorema kugadzira, simbi yekubatanidza, simbi kudhirowa, plasma kucheka, kunyatsogadzira Welding, roll kugadzira, jira simbi kukotama, kufa kuumba, mvura jet kucheka, Yakagadzirwa nemazvo Welding. Sheet simbi inotsanangurwa se: jira simbi ndeye yakazara inotonhora yekushanda mashandiro esimbi machira (kazhinji ari pazasi pe6mm), kusanganisira kuveura, kubaya / kucheka / kuumbiridza, kupeta, kupisa, riveting, kupwanya, uye kugadzira (senge mota dzemotokari). Chinhu chayo chinozivikanwa ndeyehuremu hweyunifomu yechimwe chikamu. Sheet simbi zvigadzirwa zvine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwira, magetsi conduction, yakaderera mutengo, uye yakanaka kuwanda kugadzirwa kuita. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa. Sheet simbi kugadzira kwave kushandiswa zvakanyanya muminda yemagetsi, kutaurirana, mota indasitiri, uye zvekurapa zvekushandisa. Semuenzaniso, mumakesi kesi, nharembozha, uye MP3, sheet sheet chikamu chakakosha. Uye zvakare, inoshandiswa mukugadzira michina yezvokurapa, uye inoshandiswa zvakare mumotokari nemotokari (matori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, matafura ekurapa, kuvaka matenga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan jira simbi Welding kushandisa michina zvikamu
- Inogona kuona kusanduka kusanganisa kweakawanda kurova michina, uye otomatiki kurodha uye kudzikisa uye workpiece clamping ine akawanda madhigirii erusununguko anogona kusangana nezvinodiwa zvakaoma kugadzirwa maitiro.
- Inogona kuve yakagadzirirwa neindasitiri CCD yekuona kuongorora kuti uone kubata kwemahara kwezvinhu zvakaoma zvebasa.
- Inogona kuona kuenderera kwakawanda kugadzirwa kweimwe chete workpiece, uye inogona kuona otomatiki kutendeuka kugadzirwa kwemhando dzakasiyana siyana uye madiki batch;
- Kugadziriswa kwepamusoro, kuti uwane kutaurirana nemimwe michina senge CNC maturusi emuchina, PLC, ekunze maseru, uye kuwana yakachengeteka uye yakavimbika kuteedzana kutonga kuburikidza nehurongwa;
- Kuita zvinhu zvakasiyana-siyana: yakakwira-performance anti-kudhumhana, kuongorora chigadzirwa, kunze axis, palletizing uye mamwe mabasa ekusarudzika;
- Multi-online otomatiki ekugadzira mitsara uye "dhijitari" fekitori dhizaini inogona kuve nyore kuoneka, kuchengetedza manpower uye nekuvandudza iyo tekinoroji yekugadzira fekitori yekugadzira.
Yakasarudzika yendarira jira simbi yekutengesa muchina zvikamu
Mashoko Cold inotenderera pepa, kwakakurudzira jira, isina simbi simbi, yakachena aruminiyamu uye aluminium chiwanikwa, yakachena mhangura nemhangura chiwanikwa, isina simbi pamusoro pekugadzirisa tekinoroji.
Surface kurapwa Zvinoenderana nehunhu hwezvinhu zvakasvibirira uye zvinodiwa nevatengi, kurapwa kwepamusoro kunoitwa kuti uwane mhedzisiro yakanaka uye yakasimba.
Maitiro makuru Sheet simbi Welding kugadzira
Pashure: Sheet simbi zvikamu zvemoto
Zvadaro: CNC ndarira zvikamu